नायिका नम्रता सापकोटा भन्छिन्, म बिबाह नै नगरी बच्चा जन्माउन चाहन्छु .. हेर्नुस भिडियो – Sandesh Press
नायिका नम्रता सापकोटा भन्छिन्, म बिबाह नै नगरी बच्चा जन्माउन चाहन्छु .. हेर्नुस भिडियो
October 1, 2021 206
हालैमा भएको एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा अभिनेत्री नम्रता सापकोटाले आफूलाई विहे नगरीकनै बच्चाको चाहना भएको बताएकी छिन् । अन्तर्वार्तामा यी अभिनेत्रीले आफू सिंगल मदर बन्न चाहेको बताएपछि निकै चर्चामा आएकी छिन् ।
गतबर्षको लकडाउनमा पनि नायिका नम्रता सापकोटाले दिएको एक अभिव्यक्ति चर्चामा रह्यो । नम्रताले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ‘नेपोटिज्म र ग्रुपिजम’ भएको भन्दै बयान दिइन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा राम्रा कलाकार भन्दा पनि आफ्ना कलाकार चल्ने गरेको उनको तर्क थियो । परिवारबाट आएका कलाकारदेखि समुह बनाएर काम गर्ने कलाकार चलेको उनको तर्क थियो ।
नम्रताको यो अभिव्यक्तिले गाली र ताली दुबै पायो । कतिपयले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ‘नेपोटिज्म’ नभएको भन्दै नम्रताको आलोचना गरे । कतिपयले भने उनको भनाईमा समर्थन जनाए । उनै, नम्रता यो बर्ष फेरि एउटा अभिव्यक्तिको कारण चर्चामा छिन् । नम्रताले ‘बिहे नै नगरी बच्चा पाउन मन छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले उनलाई फेरि चर्चामा ल्याइदिएको छ ।
नायिका नम्रता सापकोटा फेसनको दुनियाँमा अगाडि छिन् । कार्यक्रमको प्रकृती अनुसार पहिरन लगाउन उनी सिपालु मानिन्छिन् । म्यूजिक भिडियोमा फाट्टफुट्ट देखिने यी नायिका विदेश कार्यक्रममा भने बढी व्यस्त भएको पाइन्छ । करिअर जुनसुकै मोडमा कुदेपनि नम्रताको यो अभिव्यक्ति भने चर्चाको बाटोमा नै कुँदिरहेको छ ।
विहेभन्दा आफूलाई बच्चा पाउन मन लागेको र बिहे नै नगरीकन पनि बच्चा पाउन सकिने अभिब्यक्ती दिदै उनी भन्छिन, ‘अहिले म विवाह चाहँदिन तर, बच्चा चाहिँ चाहन्छु । दुई चार वर्षमा मेरो विहे भएन भने बच्चा चाहिँ पाउँछु होला ।’
समाज र समय विस्तारै परिवर्तन भएको बताउँदै नम्रताले सिंगल मदरको ट्रेन्ड बढेको पनि जनाएकी छिन् । आमाको माध्यम मार्फत बच्चा जन्माउनुले वैधानिक पाएको बताउँदै नम्रताले बच्चा पाउनु आफ्नो इच्छा भएको बताइन् ।कतिपयले चर्चामा आउनकै लागि उनले बेला–बेलामा विवादस्पद अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्दै उनको आलोचना गरेका छन् भने कतिपयले उनको कुरामा समर्थन जनाएका छन् । टिकटकमा पनि उनको भनाइको सानो टुक्रा भाइरल छ ।
यो बिषयमा नम्रताले भनिन्–‘मैले भन्न खोजेको कुरालाई गलत तरिकाले वुझियो । यदि मैले बिहे गरिनँ भने पनि बच्चा जन्माउँछु भनेर भन्न खोजेको थिएँ । अहिलेको यूगमा बच्चा जन्माउनका लागि बिहे नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन ।
बच्चा जन्माउनका लागि विभिन्न प्रविधीहरु आइसकेका छन् ।’ गतबर्षको लकडाउनमा नै नम्रताको बिहेको कुरा चलेको थियो । सो समयमा उनले बच्चा ‘कोख’ लिने सोच बनाएकी थिइन् ।
नम्रता अगाडि भन्छिन्–‘अहिलेको समयमा बच्चा जन्माउनका लागि शारीरिक सम्पर्क राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । टेष्ट्यूबदेखि विभिन्न तरिकाले बच्चा जन्माउन सकिन्छ । बच्चा कोख लिन पनि सकिन्छ । तर, यो मेरो सोच मात्र हो । कुनै पनि कुरा सोच्न त पाइन्छ होला नी ।’
नम्रताले यो भनाइपछि आफूलाई विभिन्न यूवतीहरुले म्यासेज गरेको बताइन् । भनिन्–‘धेरै यूवतीहरु समाज र परिवारको डरले यो बिषयमा बोल्न चाहदैनन् । तर, उनीहरुले मलाई नेपालमा यस्तो गर्न कानुन कस्तो छ भनेर सोध्नुभएको छ । धेरैको चाहना एकल महिला बन्ने रहेछ ।’ नम्रताले आफूले चर्चामै आउनका लागि यस्तो बयान नदिएको पनि बताइन् ।
Prevचर्चित गायक राजेश पल राईको बर्थडे मा सुरक्षा केक लिएर घर पुगेपछि घोषणा भयो विहेको मिति! सुरक्षा लाजले भुतुक्कै (भिडियो सहित)
Nextतपाईलाई पिनाश छ ? उसोभए थाहा पाउनुहोस यसका लक्षण,समस्या र समाधानका उपायहरु
निषेधाज्ञा हटाउने तयारि गर्दै गर्दा संक्रमणको आज आयो यस्तो नयाँ अपडेट